သီဟသစ် ရဲ့ အားမာန်သစ်: Let’s talk about Chan Chang’s Name
သီဟသစ်နှင့် နှင်းဆီဖြူတို့ရဲ့ သား ချန်းချန်လေးအတွက် ရန်ကုန်က ဗေဒင် အဖွဲ့မှာ နာမည်တွေ ပေးထားတာ ရပါပြီ။ နာမည်လေးတွေကို မှည့်တဲ့နည်းနဲ့ပါ တွဲရေးပြီး ပို့ထားပေးတယ်။ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေရဲ့ idea ယူခွင့်ပြုပါဗျာ။ နာမည်လေးတွေကို အသစ်စဉ်းစား သို့ ခုရှိထားတဲ့နာမည်ထဲက vote လုပ်ပေးပါဗျို့။ Thanks.. vote က အရေအတွက် ကြိုက်သလောက်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ..
သီဟသစ်တို့ လောလောဆယ် စဉ်းစားထားတဲ့နာမည်က မောင် လင်းသန့်ပိုင် ပါ။
ချန်းချန်လေးက ကြာသာပတေးသား အထွန်းဖွားပါ။
A. မူလ+မူလ အမည်ပေး စံနစ်
၁) မောင် ဘုန်းဇင်မြတ်
၂) မောင် မျိုးဆက်ပိုင် (သို့) မိုးဆက်ပိုင်
၃) မောင် မိုးယံမင်းပြည့်
၄) မောင် ဗညားပိုင်
၅) မောင်ဘုန်းထွဋ်မြတ်
၆) မောင် ပိုင်စွမ်းပြည့်
၇) မောင် ဘုန်းစည်သူမောင်
B. ဆပွတ် + မူလ အမည်ပေး စံနစ်
၈) မောင် စွမ်းပြည့်ပိုင်
၁၀) မောင် ဇေယျာဘုန်းမြင့်
၁၁) မောင် ဥာဏ်မင်းပိုင်
၁၂) မောင် ဇွဲနိုင်ဖြိုး
၁၃) မောင် ဇေဘုန်းပိုင် သို့ ဇေဘုန်းမြတ်
C. အမြစ် + မူလ နာမည်ပေးစံနစ်
၁၄) မောင် ရန်နိုင်ဖြု
၁၅) မောင် ဝေယံဘုန်းမြတ်
၁၆) မောင် ရဲစွမ်းပိုင်
၁၇) မောင် လင်းသူရမောင်
၁၉) မောင် ရဲနေဘုန်း
၂၀) မောင် လင်းထက်မြက် သို့ ရဲထက်မြက်
D. အမြစ် + မူလ အမည်ပေးနည်း
၂၁ မောင် လင်းသန့်ပိုင်
အဲဒီနာမည်တွေထဲက မကြိုက်ရင် အခြား အမည်ပေးရအောင် အမည်ပေးနည်းပါ သူတို့က ထည့်ထားပေးတယ်ဗျ။
A) မူလ+မူလ အမည်ပေး စံနစ်
ရှေ့ဆုံးစာလုံး - ကြာသာပတေး
အလယ် - (ပ ဦးစားပေး) တနင်္ဂနွေ၊ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသာပတေး
(ဒု ဦးစားပေး) တနင်္လာ၊ သောကြာ၊ စနေ
နောက်ဆုံး - ကြာသပတေး
ရှေ့ဆုံးစာလုံး - အင်္ဂါ
C. ဆပွတ် + မူလ အမည်ပေး စံနစ်
နောက်ဆုံး - အင်္ဂါ
ရှေ့ဆုံးစာလုံး - ဗုဒ္ဓဟူး
နောက်ဆုံး - ကြာသာပတေး
E. အမြစ် + မူလ အမည်ပေးနည်း
ရှေ့ဆုံးစာလုံး - တနင်္ဂနွေ
အမည်နေ့နံတွေ မသိတော့မှာ စိုးလို့ ရေးပေးပါရစေ။ မှားနေရင် ပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
တနင်္ဂနွေ - အ
တနင်္လာ - က ခ ဂ ဃ င
အင်္ဂါ - စ ဆ ဇ ဈ ည
ဗုဒ္ဓဟူး - ယ ရ လ ၀
ကြာသာပတေး - ပ ဖ ဗ ဘ မ
သောကြာ - သ ဟ
စနေ - တ ထ ဒ ဓ န
၁) ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့ ကိုချုချာ
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အတွင်းက ဖြစ်သည်။ မိုင်းအပြည့်မြှုပ်ထားသော လမ်အတိုင်း တပ်သား ချူချာ သတိထား လျှောက်လာသည်။ နားနှစ်ဖက်ကို လက်နှစ်ချောင်းဖြင့် ထိုးပိတ်ထားသည်။ နှုတ်မှလည်း ပြောသည်။
“မတော်တဆ တက်နင်းမိလို့ …. ဗုံးပေါက်တာကြောင့်နဲ့ နားကန်းသွားရင် ဒုက္ခ”
၁) Dr: ခင်ဗျားရဲ့ ချောင်းဆိုးသံကို ကျွန်တော် မကြိုက်ဘူးဗျာ
Patient: ကျွန်တော်လည်း တခြားလို မဆိုးတတ်ဘူး ဆရာရယ်
၂) Patient : ဒေါက်တာ .. ကျွန်တော့်မှာ လိပ်ခေါင်း ရှိနေတယ်ဗျ
Dr: ဟုတ်လား ဘယ်နေရာမှာလဲ
Posted by သီဟသစ် at 11:22 PM
ကိုယ်တွေက ဗေဒင်ဆရာ မဟုတ်လို့ နာမည်လှလှ စဉ်းစားလို့ ထွက်ပေမယ့် ကလေးကို ကိုယ်အကြံပြုတဲ့ နာမည်ကြောင့် effect တစ်ခုခု ဖြစ်မှာ စိုးတာနဲ့ ကျွန်တော်တော့ ဗေဒင်အဖွဲ့ ရွေးပေးထားတာလေးတွေပဲ Vote ပေးခဲ့ပါတယ် ... သူတို့ပေးထားတာလေးတွေလည်း လှပါတယ် .. ကျွန်တော်တော့ သဘောကျတယ်
-ဥာဏ်မင်းပိုင် နဲ့ ဇေဘုန်းမြတ်
- လင်းသူရမောင် နဲ့ လင်းထက်မြတ်
လင်းသန့်ပိုင် လေးလည်း လှပါတယ် .. ကလေးနာမည်တွေ ခုတစ်လော ရွေးပေးနေရတာ များနေတယ် ဟိုတစ်နေ့ကလည်း မနိုင်းနိုင်းစနေ ဘလော့မှာ နာမည်သွားရွေးပေးခဲ့ရသေးတယ် .. ပျော်စရာကြီး .. ကိုယ်ရွေးတဲ့နာမည် ပါပါ မပါပါ ကိုယ်က အကြံပေးလိုက်ရတာ ကိုယ့်မှာ ကလေးတစ်ယောက်ရသွားသလိုပဲ .... ပျော်တယ် ... နာမည်ပေးပြီးရင် ပို့စ်လေး ရေးဦး ... သားပုံများများလေးနဲ့ .. :) အဆင်ပြေပါစေ .. သားသားချန်းချန် လေး အောင်မြင်ထက်မြက်တဲ့ သားလေး ဖြစ်ပါစေ ...
ဖေဖေ မေမေ တို့ ကြိုက်တာသာ ပေးပါလေ၊ လင်းသန့်ပိုင်လေး လဲ လှတာပါပဲ
အယ်ဇီ: ဝေယံ လို့ ခေါ်ကြည့်တော့ ခေါ်လို့ ကောင်းတယ်
10 Jun 09, 00:47
အယ်ဇီ: လင်းသန့် ပိုင် လည်းလှတယ်။ ဝေယံဘုန်းမြတ်လည်းလှတယ်
ဆောရီးပါ ဦးဦးရေ.. စာလုံးပေါင်း မှားသွားတယ်...အဟီးး ရေးချင်တာက
ဗေဒင်ကိန်းခန်းညှိပြီးသားဆိုတော့ ခေါ်လို့ပြုလို့ကောင်းမယ့်နံမည်ပဲ ရွေးကြတာပေါ့ဗျာ။
(A) မျိုးဆက်ပိုင် (၉၅%)...အသံထွက်ရတာ အားပါတယ်။ ယောကျာ်းဆန်တယ်။ အမြန်အသံထွက်လို့တော့ သိပ်မကောင်းဘူး။ နောင်တစ်ချိန် သူ့ကို ကောင်မလေးတွေကခေါ်မည့် နံမည် ဖြစ်နိုင်ချေ= "ကိုမျိုးဆက်ရေ"၊ "ကိုဆက်ပိုင်ရေ"။
(C) ဝေယံဘုန်းမြတ် (၉၈%)...ခန့်တယ်။ ခေတ်လူငယ်တွေနဲ့ ကီးကိုက်မယ့်နံမည်ပဲ။ အင်္ဂလိပ်လို စာလုံးပေါင်းကြည့်တာတော့ နည်းနည်းခေါင်းစားသွားတယ်။
(D)လင်းသန့်ပိုင် (၁၀၀%)...မိဘတွေက ကြိုက်တဲ့နံမည်။ "လင်းသက်ပိုင်လေးရေ၊ လင်းသက်ပိုင်လေးရေ"။ ခေါ်လို့ကောင်းတယ်၊ ဖြူဖြူတုတ်တုတ် ကလေးလေးတစ်ယောက်ပုံ မျက်လုံးထဲမှာ ပေါ်လာတယ်။
ကဲ၊ ရွေးပေးပြီးပြီ။ ကင်ပွန်းတပ်ပွဲပဲ ကျန်တော့တယ်။ မဖိတ်လို့ကတော့ ကလေးကို နံမည်ပြောင်တွေ လိုက်ပေးမှာဗျို့။
အီကြာကွေးတို့... ဓာတ်ဘူးတို့... ဖိုးပါကြီးတို့တော့ မကောင်းဘူး...
သန်းတို့ ရွှေတို့ ပါရင် လူမုန်းများမယ်... ဒါလဲ မကောင်ဘူး...
"သီဟသစ် ဂျူနီယာ" လို့တော့ ဘာပြုလို့ ဘယ်သူမှ အကြံမပေးမိ ကြပါလိမ့်....
"မောင်လူထွေး" လို့ ပေးချင်လဲ လက်ခံပါတယ်... ဝစီပေါဓားကျီးပါဒယ်...းဝ)
ကဲ.. ကျွန်တော်တော့ နာမည်တတွဲ အသစ်ပေးချင်တယ်ဗျာ..။
မျိုးဆက်ပိုင် ဆိုတဲ့ နံမည်ကို ကြိုက်တယ် ညီရေ့...
အပေါ်ကလူတွေ ပြောသလိုပါပဲ... အားမာန်ပါတယ်... ယောက်ျားဆန်တယ်... ခေတ်မီတယ်... ခေါ်လို့လည်း ကောင်းတယ်...
ကျန်တဲ့ နံမည်တွေတော့ မကြိုက်ဘူး....
မျိုးဆက်ပိုင်လို့ နာမည်ပေးမယ်ဆိုရင် သူကမွေးမယ့် နောက်မျိုးဆက်ကလေးလေးကို ဘယ်လိုနာမည်ပေးမလဲ စိတ်ဝင်စားသွားတယ် ... ( မျိုးဆက်ဆက်ပိုင်လား...)
မျိုးဆက်ပိုင်ရော လင်းသန့်ပိုင်ရော နှစ်မျိုးလုံး ကြိုက်တယ်..... (ma mie nge )
ထက်မြက်တဲ့ “ဥာဏ်” နဲ့ ပြည့်စုံပြီး
တင့်တယ်မြင့်မြတ်သော “မင်း” တပါးကဲ့သို့
လောက ကို “ပိုင်” စိုးနိုင်သောသူလို့...
အားလုံးထဲမှာ ဒီနာမည်တစ်ခုပဲ သဘောကျမိတယ်
သားကတော့ သီဟဖြူပဲ ကြိုက်တယ် အဟဲ
ဒါမှမဟုတ် သီဟဆီ ပေါ့ အဖေကော အမေကော ပါတာပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား
တူလေး လင်းသန့်ပိုင် နာမည်ပေးကင်ပွန်းတပ်တော့ စားရချေရဲ့ ရှောင်မပြေးနဲ့ ကိုသီဟ တွေ့မယ်
ဘာရွေးရမှန်းကို မသိဘူး...။ လင်းသန့်ပိုင်
မိဘစိတ်ကြိုက်ရွေးတာ ပိုကောင်းတာပေါ့ :D
နေ့သင့် နံသင့်ပဲကြိုက်လို့ A ကို vote လုပ်ပါတယ်။ A ထဲမှာတော့ မျိုးဆက်ပိုင်ကိုရွေးပါတယ်။
နောက်တယောက်မွေးရင်လည်း နာမည် ဆင်တူလေးဖြစ်မှကောင်းမယ် ထင်တယ်နော်..း)
အမြစ်တို့ ဆပွတ်တို့ဆိုတာ ဘာတွေပါလိမ့်...
တို့ကတော့ ဝေယံဘုန်းမြတ်လည်း ကြိုက်တယ်..
လင်းသန့်ပိုင်ဆိုတာနဲ့ လန်းလန်းဆန်းဆန်း ကလေးလေးတစ်ယောက် လူငယ်လေးတစ်ယောက်ပုံပေါ်တယ်
နာမည်လေးတွေကတော့ လှပါတယ်။ ဥာဏ်မင်းပိုင်၊ လင်းထက်မြက်၊ မင်းကောင်းမြတ် ဆိုတဲ့ နာမည်လေးတွေက ထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့ တန်ဘိုးရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
း).. ဒါလည်း ဗဟုသုတရတာပေါ့..
အခုမှ ကိုသီဟသစ် နံမည်အရင်းကို သိလို့ လင်းသန့်ပိုင် ကိုပဲရွေးလိုက်ပါတော့လို့ လာပြောတာ.. အဖေနံမည်ပါတော့ ကောင်းတာပေါ့။း)
၂၀) မောင် လင်းထက်မြက် သို့ ရဲထက်မြက်<-- ကြိုက်တာလေးတွေပါ...ကိုကြီးရေ...ကလေးလေး ထက်မြက်မယ်ထင်တယ်...
ပိုင် ဆိုတဲ့နာမည်ပါအောင်တော့ ပေးဗျ...
မိဘတွေ စိတ်ကြိုက်ရွေးတာ အကောင်းဆုံးပါ။
ယောက်ျးလေးနာမည် လေးလုံး ဆိုရင်တော့ မကြိုက်ဘူး။ ယောက်ျားလေးနာမည်ဆို နှစ်လုံး နဲ့ပြတ်ပြတ်သားသားရှိတာကို ပိုကြိုက်တယ်။ ခုခေတ်အလိုဆိုရင်တော့ ၃ လုံးလောက် အတော်ပါပဲ။ လင်းသန့်ပိုင် ဆိုတာ ကောင်းပါတယ်။
ဗေဒင်နဲ့ ကိုက်မကိုက်တော့မသိဘူး.. ကြိုက်လို့.. :))
အတော်ပဲ အတော်ပဲ။ ကြိုက်တယ်။ :P
အကြိုက်ဆုံးကတော့ နာမည်ကိုပြောလိုက်တာနဲ့ ဘာနေ့သားလဲဆိုတာ တန်းသိစေမယ့် မွေးနံရှေ့ကပါတဲ့နာမည်မျိုး။ ဥပမာ မင်းသူရိန်ထွန်း မြတ်သီဟမာန် ဖြိုးရာဇာ ။
ဒါပေမယ့် မိဘနှစ်သက်တဲ့နာမည်သာ အကောင်းဆုံးပါပဲ ယောက္ခမရယ်။ ကိုယ့် နာမည်လဲပါတာပဲ။ ငြင်းစရာရှိဘူး။ရှိဘူး :P
လင်းသန့်ပိုင်လေးလဲမဆိုးပါဘူး ကျန်တဲ့နာမည်ကိုကြိုက်တာကတော့ ဇေဘုန်းမြတ်နဲ့လင်းသူရမောင် အဲ့ဒီလင်းသူရမောင်နေရာမှာ လင်းသီဟမောင်ဆိုအဖေနာမည်ပါပါသွားမယ်ထင်တယ် နေ့နံနဲ့ကိုက်မကိုက်တော့မသိဘူးနော် အကြံပေးကြည့်တာပါ
ကိုသီဟသစ်ရေ... မဗေဒါကတော့ ကြာသပတေးသားဆိုရင် ကြာသပတေးနဲ့ စတဲ့နာမည်ပဲ ပေးတာကြိုက်တာပဲ.. အဲဒိ ဓလေ့လေးက မြန်မာတွေမှာပဲရှိတာလေ.. နာမည်အစစာလုံးကြားတာနဲ့ ဘယ်နေ့မွေးလဲ သိနိုင်တာလေ.. နိုင်ငံခြားသားတွေဆိုရင် သူတို့ဘယ်နေ့မွေးလဲတောင် အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ပဲ...
ဒီတော့ မဗေဒါကတော့ "ပိုင်" ဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေလဲ ကြိုက်တော့... မျိုးဆက်ပိုင် ဆိုတဲ့ နာမည်လေးကြိုက်တာပဲ... ဒါပေမဲ့ အစ်ကိုတို့က မိဘတွေဆိုတော့ မိဘက ဆုံးဖြတ်တာ ပိုကောင်းပါတယ်... နာမည်တွေအများကြီးပဲ မိုက်တယ်.. မဗေဒါ ၀တ္တုေ၇းဖြစ်လို့ မင်းသားနာမည်စဉ်းစားလို့မရရင် ဒီက နာမည်လေတွေ ယူသုံးမယ်နော်.. နာမည်တွေက လန်ထွက်နေလို့.. အဟိ...
လင်းသန်.ပိုင် လေးကလှတယ် အကိုရေ...
ပေးဆို အဖေနာမည်သီဟ လဲပ်ါ ကြာသပတေး
လဲဖြစ်အောင် မိုးသီဟထက်ပိုင် လို.ပေးခဲ.တယ်ဗျို.
အော်.. စွမ်းပြည့်ပိုင်တော့ မပေးနဲ့ အစ်ကိုရေ.. စွမ်းပြည့်ပါတဲ့ လူတွေက လူ့ဂွစာတွေများတယ်.. ဟိုတစ်နေ့ကပဲ East Coast မှာ တွေ့ခဲ့တယ်ဟုတ်.. (မတော်တဆ တမင်တကာ တစ်ယောက်သောသူကို ရည်ညွှန်းပြောသည်..)
့နာမည်ဆိုတာ လူနဲ့ တသားထဲ ဖြစ်သွားတတ်တာမို့ သားသားနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးနာမည်လေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
:-) အမည် . . . (အများကြီးထဲက တစ်ခု) လို့ ခေါ်တွင်သော ကလေးလေး ပျော်ရွှင်ပါစေ...
ဖေ နဲ့ မေ ရွေးထားတာတော့ကြိုက်တယ်။
ဒါပင်မဲ့ နည်းနည်းလေးတော့ ကွန့်ချင်တယ်ဗျ
ကျနော်က နာမည်လေးလုံးကို ပိုကြိုက်လို့ပါဗျာ
မျိုးဆက်ပိုင်.. အဓိပ္ပာယ်တော့ အပြည့်ကောင်းတဲ့ နာမည်ပဲ..။ “ဥာဏ်မင်းပိုင်” ကိုလဲ ကြိုက်တယ်ဗျာ။
လင်းသန့် ပိုင် က နာမည်ကြားတာနဲ့ 
အဖြစ် မြင်ယောင်စေပါတယ်။ ကောင်းတယ် အဲဒီနာမည်။
အဲဒီနှစ်ခုကြိုက်တယ် ..း)
၁ ရယ် ငါး ရယ်ဗျာ
ရန်ကုန်က ဗေဒင် အဖွဲ့ ဆိုတာကို သိခွင့် ရှိမလား ရှင့်
နောက်လမှာ သားလေးမွေးမှာ မို့လို့
ပေးထားတဲ့နာမည် လေးတွေက အရမ်းလှလို့ပါ
မမာမာရေ ဗေဒင်အဖွဲ့နာမည်က ကွန်ပျူဗေဒ သုခုမအဖွဲ့ပါ။
noizer 22 said...
နာမည်ပေးနည်းတွေက ရန်ကုန်က ကွန်ပြူဗေဒ သုခုမ အဖွဲ့ကို လှမ်းမေးထားတာပါခင်ဗျာ။
ဆိုခဲစေ မြဲစေ၊ ချစ်တယ် : ဒီအချိန် ကျောင်းတော်ကြီး ...
နှစ်ကိုယ်တူညီ ချစ်ဖူးတဲ့ တက္ကသိုလ်ဆီ : ဒီအချိန် ကျေ...
ဒီအချိန် ကျောင်းတော်ကြီး ရဲ့ အလယ်မှာ (၃)
လွမ်းရယ်မပြေ : ဒီအချိန် ကျောင်းတော်ကြီး ရဲ့ အလယ်မှ...
ဒီအချိန် ကျောင်းတော်ကြီး ရဲ့ အလယ်မှာ (၁)
လျှို့ဝှက်ခြင်း ပွင့်လင်းခြင်း Grow up Grow Old